Iyo sosi inzira iri nyore yekutaurirana, kutaurirana pane chero chinyorwa chisingade kunyoreswa.Vanhu vazhinji vakajaira kubata chats dzakadai kuti vawane mhinduro dzemibvunzo yakakosha, nezvimwe.Vese vashandisi vane maprofiles avo ane mafoto, ruzivo nezve yavo uye yavo yekuonana, saka saiti yakachengeteka zvachose uye inoshandisa yazvino encryption maturusi, kuitira kuti hapana muridzi weprofile anogona kuwana tsamba yako.
Izvo zvakakosha zvemutambo
Chat Roulette ine maviri makuru maficha: monologues uye mavhidhiyo.
Monologues chikamu chezvinyorwa zvevhidhiyo chat, kwausingagone kungotaura neanopindirana, asi zvakare kumubvunza mibvunzo kana kutaura nezvemhinduro dzake.
Panguva yekukurukurirana kwevhidhiyo, vhidhiyo isina mazwi inogona kunge iine mifananidzo inoratidza yako chaiyo yekutaura.
Kana iwe uchingoda kutaura, saka iwe unofanirwa kuratidza yako data mumashoko, ratidza kuti ndeipi chat yaunoda uye sarudza imwe yevanopindirana yekutaurirana.
Munguva isiri-yekushanda maawa paKumba peji, unogona kuona mavhidhiyo pasina kukanganiswa kubva pakuita kwayo.
Mumwe munhu paanopindura mubvunzo wako, unoverenga mashoko anobuda pazasi pekrikirini.
Iwe unogona kunyararidza chat uye kuverenga kana kupindura kune yako meseji.
Kukurukurirana kwese kunoitika muchiRussia.
Kune marudzi maviri ekurukurirano - kupa mhinduro uye kutaurirana zvakananga.Kune marekodhi ekurekodha ekutaura, kutaurirana kwevhidhiyo chete kunowanikwa pakutaurirana kwakananga.Maminitsi mashanu ega ega munyika yose pane inogadziridzwa yekukurukurirana kwevhidhiyo - izvi zvinoreva kuti une vatsva vanopindirana.Mutauriri wako anogona kuverenga mhinduro yako uye oenderera mberi nehurukuro.Kana iwe uchida kuti munhu mumwechete aite nguva nenguva seanopindirana, saka iwe unofanirwa kuita zvinotevera:
Enda kuChatRoulette chikamu (iri mumenyu yepamusoro kuruboshwe) uye sarudza chikamu che "Vhidhiyo Chat".
Dzvanya bhatani rekuti "Tanga Kukurukurirana" kuti uone kutepfenyura kwevhidhiyo.
Paunenge uchijoinha Chat Roulette, iwe unova nhengo yepeji huru yesaiti muRussia uye sarudza imwe yeavapo interlocutors.
Mushure mekusarudza interlocutor, unogona kutanga kutaura naye.Mushure memhinduro yemutauri wako, iwe uchaona yake "Comments" tab.Ikoko unogona kunyora chimwe chinhu uye kumutumira kwaari.Kana vhidhiyo yakarekodhwa nemutauriri wako, icharatidzwa
Chat Roulette ikurukurirano yevhidhiyo yemutauro weRussia, inoshanyirwa zuva nezuva nenhamba huru yevashandisi vanobva kuRussia nenyika dzeCIS.Iyo analogue yeanozivikanwa emutauro wechiRungu portals, ayo anozivikanwa zvakanyanya pakati pevanhu vanobva kunyika dzakasiyana dzepasi.Nerubatsiro rweRussian chat chat roulette, ine nyore, intuitive interface, unogona kunakidzwa nekukurukurirana kunonakidza kwepamhepo, pamwe nekuita zvitsva zvinonakidza, uye zvinowanzobatsira, vanozivana kuburikidza neInternet.Iwe hauzove nematambudziko emutauro mukuita kwekutaurirana, nekuti ruzhinji rweRussia vhidhiyo yekukurukurirana vashandisi vanotaura chiRussian.
Sevhisi yedu yakavhurika kune vese vanhu vari kutsvaga vatsva vanofarira kuzivana.Iye zvino iwe unongoda zvinhu zvitatu zveizvi: webcam, maikorofoni uye mafungiro akanaka.Chatroulette yakatowana mukurumbira: vanhu vanopfuura mamirioni maviri vakanyoreswa zvachose, uye base base inozadzikiswa nevanhu zviuru zvitatu zuva nezuva.Chat-Ruletka.com inoshanda pamusimboti wekufambidzana.Iwe unobatidza kamera, dzvanya "Tanga" uye iyo sisitimu inosarudza isina kurongeka interlocutor iwe, waunogona kutanga kutaura naye kana kudzvanya "Inotevera" kana iwe usingade mushandisi uyu.
Yedu yevhidhiyo chat Roulette inopa yakawanda mikana yekutaurirana.Nayo, iwe unogona kuita vanozivana, kuwana zvitsva zvinoonekwa, kuwedzera hupenyu hwako horizons.Mikana yekukurukurirana kwakadaro yakawedzera kupfuura neyakajairwa Internet tsamba, nekuti inobvumira vanopindirana kuonana vachishandisa webcam.Kana iwe uchinzwa nyota yekutaurirana,vhidhiyo yekutauraichakubatsira iwe kuziva zvishuwo izvi.
Zvinoumba Chat Roulette
Vhidhiyo kufambidzana: rekodha chimiro chako pavhidhiyo
Pamusoro pekutaura kwevhidhiyo, unogona kurekodha vhidhiyo profil inozotora chikamu mukutsvaga.Kufanana neanonakidza profiles, nyora mameseji uye wedzera vashandisi seshamwari.
Yakavanzika mameseji: wedzera vashandisi seshamwari
Pamusoro pemibvunzo yevhidhiyo, mune yazvino vhezheni yevhidhiyo chat yedu, takawedzera kugona kutumira meseji yakavanzika.Kutumira meseji, wedzera interlocutor seshamwari.
Instant kunyoreswa uye mushandisi-ane hushamwari chimiro
Yedu vhidhiyo yekutaura ndeyemahara uye yakagoverwa pasina kunyoreswa, zvisinei, kuti utore zvizere mukana wezvese maficha, iwe ucharamba uchikumbirwa kunyoresa.Kunyoresa kuri nyore sezvinobvira uye hakungakutorei kupfuura masekonzi makumi matatu - unongoda kuisa email yako wozoisimbisa nekudzvanya pane chinongedzo chakatumirwa.Mune yako mbiri mbiri, unogona kuratidza zviri nyore zvishuwo zvako zvekusarudza anopindirana uye kutsvaga kwekutaura kuchaitika zvinoenderana nezvaunoda.
Sei uchidzoreredza chiyero muakaundi yako?
Webhusaiti yeChat-Ruletka.com ndeye freemium sevhisi, zvinoreva kuti iwe unogona kushandisa yedu yevhidhiyo chat mahara, asi kuti ushandise zvese sarudzo uye kutsvaga chete vasikana mukutaura, iwe uchakumbirwa kuti uwedzere chiyero. uyezve kushandiswa kweiyo vhidhiyo chat kunobva kwazara.Izvi ndezvekuzvidira zvachose, kana iwe usina chido, unogona kushandisa yedu yevhidhiyo chat kunyange pasina kunyoresa, nekungodzvanya bhatani re "Tanga Kutsvaga".Nekudaro, kana iwe uchida kurekodha profiles, wedzera vashandisi seshamwari uye kutaurirana zvakananga nevasikana, tinokupa zano kuti ubvise kurambidzwa.
Nheyo yekuseri kwechatroulette
Chatrouletteinoshanda pamusimboti wekufambidzana zvisina tsarukano.Kushandisa iyi online sevhisi kuri nyore kwazvo.Iwe haufanirwe kuenda nenzira dzinonetesa dzekunyoresa, zadza marefu profiles neruzivo rwakadzama nezvako, nezvimwe.Kupinda iyo saiti Chat-Ruletka.com, iwe unongofanirwa kudzvanya "kutanga" kiyi, uye wozomirira interlocutor yako.Mutauriri wako anogona kunge ari munhu kubva kune chero kona yepasi.Mushure mekutaura nevapindiri vechikadzi kwechinguva, unogona kusarudza kuti unoda kuramba uchitaura here kana kuti kwete.Kana iwe ukaona kuti interlocutor yako inofinha, saka unogona kuenderera mberi nekutsvaga nekudzvanya bhatani re "rinotevera".
Vhidhiyo chat Chat-Ruletka.com ndeyemahara uye isingazivikanwe.Kune vakawanda vashandisi, izvi zvinhu zvinosarudza.Imwe bhenefiti yekukurukurirana kwakadaro ndeyekusafungidzirika kwechigumisiro, icho chinopa manzwiro akawanda anofadza.
Vhidhiyo chat kufambidzana inzira itsva yekutsvaga shamwari yakanaka
Masevhisi eInternet anopa mukana wekufambidzana pamhepo anozivikanwa zvakanyanya nhasi.Rudzi urwu rwekufambidzana runoita kuti vanhu vemazuvano vave nenguva yakanaka.Vanhu vazhinji nhasi vanokuwana kwakaoma kutaura mumugwagwa nemusikana waasingazivi.Nekuda kweizvi, nharaunda yavo yekushamwaridzana inogumira.Kukurukurirana kwevhidhiyo kunopa vanhu vemazuva ano zvakawanda zvitsva, zvisingasvikike, mikana yekutaurirana.Pamusoro pekutaura kwevhidhiyo, unogona kurekodha vhidhiyo profil inozoshandiswa mukutsvaga.Iwe unogona zvakare kurodha maavatars uye kuwedzera vashandisi vekufarira kwauri seshamwari.
Kukurukurirana kwevhidhiyo kutaurirana kwekuzvidira pakati pevanhu vaviri - chero wavo anogona kukanganisa nhaurirano chero sekondi pasina kutsanangura zvikonzero (zvese, senge muhupenyu hwemazuva ese, nemusiyano chete wekuti kutaurirana uku kunoitika kure).Iwe kana murevereri wako anosungirwa kupa mazita avo chaiwo, kuratidza kero, kupa ruzivo - izvi hazvibvumidzwe, zvinogamuchirwa (mushure mezvose, iyo chat yakagadzirwa kuitira "kuderedza" moyo yakasurukirwa), asi iwe pachako unosarudza. waunoda kutaura naye kunze kwechat, uye wausingadi kutaura naye.
Chat Roulette nevasikana ndeyechokwadi!
Vasikana vari mu chat roulette havasi rudzi rwevamiririri vanobhadharwa vane basa rekukwezva nekuvaraidza varume vakapinda iyi chat.Ava vasikana vakajairwa avo, sewe, vakaguma pakutaura uku vachitsvaga mweya wavo wekuroora kana mufambidzani anofadza.Panyaya iyi, Chat-Ruletka.com vhidhiyo yekukurukurirana inogona kunzi sevhisi yekufambidzana, nemusiyano chete ndewekuti kuzivana kunoitika nenzira yekusarudzika kusarudzwa uye kutaurirana kwepamhepo pasina kutanga "zvisina zvazvinoreva" tsamba nemunhu anoratidzwa mukati. iyo "mufananidzo" - mukomana nemusikana anoona mutauriri wake uye anonzwisisa kuti aya haasi mapikicha enhema, asi munhu chaiye.Vamwe vakomana, vachitya kurambwa, vanonyara kutaura nevasikana munzvimbo dzine vanhu vakawanda uye kuti vazivane navo.
Chat-Ruletka.com vhidhiyo yekutaura haisi yekungovaraidza uye nzira yekuva nenguva yakanaka.Iwowo mukana wekutsvaga mweya wako wekuroora.Chatroulette nevasikana inobvumira vechidiki kuti vatange kutaurirana zviri nyore nebonde rakanaka, zvichiita kuti vawedzere kusununguka, kushamwaridzana uye kukwezva.Chatroulette nevasikana ipuratifomu yakanakira kwaunogona kutaura nemunhu asina kujairika.Muchidimbu, kuzivana kwakadaro hakuna kunyanya kusiyana nemunhu asingazivi mumugwagwa, iyo inogonawo kunzi "life roulette" - hauzombozivi kuti ndiani ane mwero runako achave ari.
Mafaro ekutora zvisingaite: vhidhiyo yekutaura roulette
Saka, iwe wakaenda kuChatroulette, wakanyoreswa - chii chinotevera?Iwe unogona kusarudza hutano hwemudiwa iwe pachako, kana iyo system pachayo inokupa iwe interlocutor yekufambidzana.Iwe unotanga kutaurirana, uyezve, sezvaunenge uine rombo rakanaka:
ChatRulet inzira yakanaka yekutaura nemunhu wausingazive.
Mitemo yekutaurirana nevasikana mu chatroulette iri nyore kwazvo:
Zvakanakira chat roulette nevasikana
Ndeapi mabhenefiti makuru ekushanyira roulette chat nevasikana?Chaizvoizvo pane maviri azvo:
Kutanga, chiitiko chekukurukurirana kwega nemusikana asina kujaira zvachose hachikuvadzi chero munhu.Chinhu chekunyara neuranda chinogadzikiswazve - kunyangwe kuonana, unonzwisisa kuti uri kure nemumwe uye kazhinji hurukuro iyi haikusungire kune chero chinhu (maitiro emumwe mufambi muchitima, akanyanya kuvimbika vanhu vanonyara).
Kechipiri, kusiyana neaya echinyakare vhidhiyo chats, pano iwe unogona chaizvo kuwana anonakidza interlocutor, uye kwete kungotenda mazango echisikigo eanopindira.
Uchiri kufunga here?Inzwa wakasununguka kuendakuChatroulette nevasikanauye ongorora zvakanakira zvese zvekufambidzana kubva pane zvakaitika kwatiri.
Chat Roulette - vhidhiyo chat kutenderera pasirese
Chatroulette(zita rinobva pashoko rokuti "Chatroulette") ihurukuro yevhidhiyo yepamhepo pasi rose, iyo inzvimbo yaunogona kutaurirana nevanhu vatsva uchishandisa webcam uye maikorofoni, asi kuti uishandise, unofanira kuva neAdobe Flash. Player yakaiswa yazvino vhezheni.
Mushanyi wesaiti yedu anosangana neanopindirana akasarudzika akasarudzwa uye anotanga kutaurirana naye, kana kamwe kamwe asina kufarira mutauriri, anogona kuchinjika nyore kune imwe (nokuda kweizvi iwe unofanirwa kudzvanya bhatani re "Next").
Izvo zvakakosha zvechat yedu:
Chatroulette yedu haina analogues uye yakatosiyana nedzimwe chats.Pazasi iwe unogona kuona 5 mabhenefiti:
Kunyoresa nekukurumidza- kuti utange kushanda nebasa, haufanire kushandisa nguva yakawanda.Kunyoresa kunotora maminitsi mashanu chete.
Round-the-clock access- unogona kupinda muhurukuro chero nguva yezuva uye uzviwanire uri interlocutor: murume kana mukadzi.
Kufukidzwa kukuru kwevateereri- mazuva ese nhamba huru yevashandisi vanobva kumativi ese enyika vanoshanyira saiti.Unogona kuwana interlocutor kubva USA, Denmark, Great Britain, Russia, Spain, Italy uye zvichingodaro.
Kutsvaga kwakagadzikana kweshamwari- haufanirwe kugara pasaiti zuva rese kuti usangane nevanhu vanofarira.Rekodha meseji yevhidhiyo kune vashandisi uye utaure nezvako.Vanhu vachanyatso tarisa rekodhi uye vokubata iwe.Iwe unogona zvakare kutsvaga shamwari nenzira imwechete.
Kusarudzwa kwevakadzi- nesu chete iwe unogona kusarudza murume kana mukadzi weanopindirana uye kusefa kunze vanhu vausingade kutaurirana navo.
Takaparadzana, zvakakosha kuziva kuti tinotevedzera mitemo yese.Nokuda kwekutuka kwakanyanya kune vashandisi uye kuratidzwa kwehurudzi kana rusaruraganda, chivharo chehupenyu hwose chinopihwa.Mhan'ara kukanganisa kumutungamiri uye ita kuti hurukuro yedu yevhidhiyo ive nani.
Mhinduro kumibvunzo inowanzo bvunzwa:
Ungabatidza sei webcam?
Hapana chakaoma apa.Kutanga, batanidza iyo webcam kune USB port kana iwe wakaitenga zvakasiyana pakombuta yako.Mushure meizvozvo, meseji yekubatanidza mudziyo mutsva inofanira kuoneka.Kana izvi zvikasaitika, saka zvinogoneka kuti chiteshi chiri pasi.Batanidza kamera kune akasiyana USB port (kazhinji pane angangoita mana pamaPC emazuva ano).
Mushure meizvozvo, iwe unofanirwa kuisa mutyairi anouya newebhu kamera.Tevera mirairo yepurogiramu uye pakupedzisira tarisa kushanda kwemutyairi.Inokutendera kuti uedze kurekodha vhidhiyo, kutora mafoto, kugadzirisa FPS, nezvimwe.Kana mutyairi asina kuuya nekamera, wobva wanyora zita remuenzaniso muinjini yekutsvaga uye tsvaga chirongwa chekupedzisira pane webhusaiti yepamutemo yemugadziri.
Pamalaptops, zvese zviri nyore - mutyairi akatoiswa, uye webcam yakavakirwa-mukati, saka haufanirwe kunetseka nezve USB port kana mutyairi vhezheni.
Iwe zvakare unofanirwa kuve neshuwa kuti wakaisa Adobe Flash Player yekuratidzwa kwayo vhidhiyo mubrowser.
Fungidzira kuti watopfuura nhanho yekugadzirira uye kamera iri kushanda nemazvo.Zvino zviri kuchinhu chidiki - pinda muhurukuro uyesarudza murume wako, wobva wadzvanya bhatani rekuti "batidza kamera", mushure mezvo chiratidzo chichaonekwa chaunoda kumaka mapoinzi maviri - "bvumira" uye "rangarira". ” wobva wadzvanya bhatani rekuvhara.
Mushure meizvozvo, unogona kushandisa zviri nyore iyo webcam muhurukuro yevhidhiyo (inozobatika otomatiki pasina mamwe marongero).
Maitiro ekubatidza uye kuseta maikorofoni?
Kuseta maikorofoni idambudziko chairo kune vazhinji vashandisi vekutaura.Chekutanga, kuridza muridzo kunowanzo kuoneka nekuda kwezvisizvo zvigadziriso zvemudziyo.Chechipiri, kunyanya kazhinji haishande zvachose uye mutauriri haakunzwi.Kuti chigadzirwa chishande zvakanaka, nzira dzinotevera dzekugadzirira dzinofanirwa kuitwa:
Batanidza maikorofoni kubhodhi reamai.Kuti uite izvi, zvibatanidze kune rear connector pane system unit.Sezvo mutemo, inotaridzwa mupinki.MaLaptops ane yakafanana mahedhifoni uye maikorofoni port, saka iwe kazhinji unofanirwa kutenga adapta (yakachipa uye ine saizi diki).
Unogona kuona kuti maikorofoni iri kushanda nemazvo mushure mekutarisa mutyairi.Enda kune yekutanga mudziyo maneja uye tarisa kune vatyairi.Kana pane zvishandiso zvisingazivikanwi, zvino tora mutyairi kuburikidza newebsite yepamutemo yemugadziri.Mushure meizvozvo, maikorofoni yako inozoonekwa mumidziyo inonzwika.
Enda kuburikidza nekutanga kune control panel, uye kuburikidza nayo kune "hardware uye ruzha" chikamu.Ikoko, muchikamu che "rekodhi", uchawana maikorofoni yako.Dzvanya pairi uye tinya bhatani re "properties" padivi.Ikoko unogona kuibatidza wotanga kuteerera.
Iva nechokwadi chekugadzirisa mazinga kuti ubvise ruzha uye uite kuti inzwi rive rakajeka.Uyewo bvisa zvose zvinonzwika mu "kuvandudzwa" tab.
Iwe unogona kuita ese ari pamusoro maitiro kuburikidza neRealtek HD Maneja.Iwe unogona zvakare kuipinda kuburikidza nechikamu mune control panel - hardware uye ruzha.
Maitiro ekudzima maikorofoni muvhidhiyo chat?
Tinya-kurudyi pachishandiso, wobva wasarudza "sarudzo" tab kubva pane inotsvedza-kunze menyu.Ikoko, tinya pane maikorofoni icon.Mune slide-out menyu, sarudza yako maikorofoni modhi, uye wozogadzirisa vhoriyamu yekurekodha (unogona kuisa inotsvedza pakati).
Mushure maizvozvi, mutauri wako anonzwa inzwi rako zvakajeka, uye maikorofoni ichashanda zvakanaka kwenguva yakareba.
Ndezvipi zvinangwa zvandingashandisa Chatroulette?
Kubva pakubvisa kutya kuenda kune dzimwe nyika - iyo rondedzero yakakura kwazvo uye zvese zvinoenderana nemafungiro ako.Pazasi iwe unogona kuona chinangwa chikuru chekushandisa Chatroulette:
Zororo- mushure mekushanda kwezuva rakaoma, unoda kuzorora uye pakupedzisira kukanganwa nezvebasa.Mukutaura, unogona kutaura pamusoro penyaya dzisina kwazvakarerekera, kurukura mitambo yemavhidhiyo, mitambo, mimhanzi, taura nezvako kana mutauri wako, zvichingodaro.
Kubvisa kutya- unotya kuimba kana kukurukura dzimwe nyaya?Mukutaura, interlocutor inosarudzwa zvisina tsarukano, saka hapana shamwari dzako dzinokuona.Iwe unogona kukurumidza kubvisa ma complexes.
Tsvaga mweya wekuroorana naye- vasikana vanosangana nevarume muhurukuro uye zvakasiyana, uye kazhinji chipingamupinyi chemutauro hachisi dambudziko guru.Kuburikidza nekutaura, vanhu vazhinji vakawana mweya wavo wekuroora, saka chii chiri kukutadzisa kuita zvimwe chete?
Kudzidza mutauro- iyo inonyanya kudhura mutauro wekunze makosi haitsivi kutaurirana neakaberekerwa mutauri.Mukutaura iwe unowana maSpanish, maItaly, maAmerican, maGiriki, maJapan, nezvimwe.Saka iwe unogona kuvandudza ruzivo rwako zvakanyanya sezvaunoda.
Kufamba- wadii kuita ushamwari nemunhu anobva kune imwe nyika uye uuye kuzomushanyira?Iye achakubatsira iwe kuwana visa uye kuwana pekugara, pamwe nekukuratidza guta uye zvakanakisa zvinoonekwa.
Iyi ipfupi rondedzero yezvaungasarudza.Rangarira kuti zvese zvinoenderana nekufungidzira kwako, asi ita shuwa kuita mukati memitemo yevhidhiyo chat yedu.
Chatrouletteibasa rakakurumbira uye riri nyore iro rinokutendera kuti utaure usingazivikanwe nevashandisi vanobva kumativi ese enyika.
Kusangana nevanhu mumugwagwa chinhu chekare.Gadzira shamwari nyowani kutenderera pasirese, taura, govana zviitiko, ratidza matarenda ako uye ingonakidzwa neanobtrusive light chatter.Chat Roulette ndeimwe yekukurukurirana kukuru muRunet ine inoshamisa kupinda, iyo inosvika mazana ezviuru zvevashandisi zuva rega rega!Taurirana nevashandisi vanotaura chiRussian kubva pasirese pasirese pasina kusagadzikana.Hapana kunyoreswa, hapana ruzivo rwemunhu, zvese zviri nyore uye nekukurumidza: dhawunirodha zvikumbiro uye tinya bhatani re "kutanga"!
Kana iwe uchinyara panguva yekufambidzana, unonyara kuuya munzira uye kutanga kuzivana, ipapo kusazivikanwa vhidhiyo chat ndiyo yaunoda!Ita shamwari itsva, vanhu vane pfungwa dzakafanana, uye pamwe kunyange mweya wekuroorana naye.
Chatroulette GooglMe - yakanakisa vhidhiyo chat yekufambidzana uye kutaura
Nhasi, iyi hurukuro inzira yakasiyana uye inofadza yekukunda kutya uye kunyadziswa, kuwana shamwari, kutanga kufambidzana, kutanga hukama.Ikozvino hapana chikonzero chekunyora mavara matema pane chena chidzitiro, hazvina musoro kushandisa nguva yakawanda pane inonetesa sarudzo yemitsara, sezvo vhidhiyo yekukurukurirana inovhura akasiyana zvachose.Iwe unongoda kuvhura komputa yako woenda kuGoogleme, uye zvimwe zvese inyaya yemukana.Iyo peculiarity yesevhisi iyi ndeyekuti unogara uchitaurirana nemunhu wausingazive.Kunyengedza kwakadaro kunofadza kuziva uye kunogadzira kufarira, hurukuro yega yega ishamwari itsva, hurukuro inodzidzisa.
Hurukuro dzinonakidza, hurukuro refu dzakamirira iwe, uchawana vanhu vazhinji vakasiyana pano, vanozivana uye, pamwe, mumwe wavo achachinja kuita chimwe chinhu.Rangarira kuti musikana wese mukwikwidzi akakodzera kumoyo wako.Pano munhu wese anowana zvaari kutsvaga.
Vhidhiyo chat - kufambidzana zvisina tsarukano pasirese
Iyo huru uye huru yekuwedzera yesaiti ndeyekuti hauzomboziva kuti ndiani achazozivana naye, kufona kwevhidhiyo.Iyo isina kujairika chatroulette, kuburikidza nesarudzo isiri-yakajairika, ichakuwana iwe munhu wehurukuro, inokupa iwe kutaurirana, kufambidzana uye akawanda emanzwiro akanaka.Hurukuro dzakadaro dzinogara dzichishamisa, dzinodzidzisa vanhu kuti vave vakasununguka uye vakasununguka, kukurumidza kugadzirisa mamiriro ezvinhu.
Iyi chat roulette haina kufanana nevamwe vese, nekuti unogona kutanga hurukuro chero nguva yakakunakira.Kunyangwe iyo hurukuro inoitika masikati kana husiku, iwe unogara uchiwana asina kurongeka interlocutor.Pano iwe unowana vaanozivana navo vanogona kushandura zvakanyanya hupenyu hwako hwese.Anopindirana asingatarisirwi uye gungwa remanzwiro akanaka - ndizvo zvakakumirira iwe kana ukashanyira chat yedu, iyo yakavhurika kwauri zvachose mahara.
Googleme iri nyore uye inokurumidza!
Rangarira kuti Googleme ikurukurirano yakavandudzwa, uko zvese zviri nyore uye nekukurumidza.Iyo mushandisi-inoshamwaridzika interface ichakubatsira iwe nyore kufamba zvese.Kune mamirioni evanyoreri mudhatabhesi vanoshandisa chat senzira yakanakisa yekufona.Asi chinonyanya kukosha ndechekuti haufanirwe kutsvaga munhu waungafarire kutaura naye, iyo yewebhu chat ichaita sarudzo iwe.Muchatroulette, zvese zvinogadzirwa sezvinobvira sezvinobvira, inova ndiyo yakakosha mukana.
Zviite ne webcam
Vanhu vazhinji vanofunga kuti chat yakadaro yevhidhiyo haigone kutsiva kutaurirana chaiko, asi mhinduro kubva kune vatori vechikamu inosimbisa chimwe chinhu chakasiyana zvachose.Muchiitiko ichi, Indaneti ichakubvumira kuti uswedere pedyo, kusvikira munguva pfupi yapfuura, mutorwa zvakanaka zvokuti iwe uchamunzwa ari pedyo zvikuru.Chinhu chimwe chete chinoitika kana uchitaurirana muPrimum vhezheni yeiyo roulette vhidhiyo chat, unogona kuzvisimbisa nekuverenga wongororo nezve KuMit.
Kuti kukurukurirana kuitike, unoda:
inokurumidza Internet, iyo ichazarura kupinda kune nyika;
webcam yenguva dzose, inova chishandiso chikuru chesevhisi iyi;
chido chako chekutsvaga shamwari dzekufambidzana uye shamwari itsva.
Kukurukurirana kwaunowana pano hakuzokanganwiki, hakuzove kwakajairwa, uye interlocutor ichakubvumidza iwe kwete kungotaura kunze, asiwo kudzidza zvakawanda zvekuziva zvinhu.Iyo yakagadziridzwa uye inonakidza kwazvo vhidhiyo yekutaura roulette inokudzidzisa iwe kuvhurika, kukunyima iwe yakaoma.
Zvimwe urikushamisika kuti sei chatrandom - mhinduro pano iri nyore - inhau yemazuva ano inongonangana nekutaurirana kwakanaka uye kutaurirana kunofadza.Hapana hunyengeri pano, nokuti vanhu chaivo vari kutora chikamu muhurukuro.Kukurukurirana kwakadaro kunobvisa matambudziko ese, uye kunopa zvakanakira.Hapana chimwe chinonakidza kupfuura kuita rudzi urwu rwekuziva uye kuwana vanhu vanofarira.
Yako webcam ichakuvhurira mikana, uye hungwaru uye kugona kutaurirana kunozova kiyi yekubudirira kufona kwevhidhiyo.Chokwadi vese vatsva vanozivana vanogona kuve kwenguva refu, pamwe hucharamba hushamwari, kana pamwe uchasangana nemagumo ako.Tinoda kukuyeuchidza kuti zvese zvinogoneka mu chatroulette, uye saka haufanirwe kusarura mukana wakadaro.Roulette yedu kuburikidza nekamera inogona kuve chishandiso chinokupa iwe kushamisika kukuru, nekuti musikana anogona kunge ari iye wawanga uchitsvaga.
PaGooglMe chete mukomana wese nemusikana wese ane mukana wekusangana nerudo rwavo.Muhurukuro yevhidhiyo isina kujairika, pane zvakawanda zvakasangana uye zvinosarudzika, dzimwe nguva pane zvinoodza mwoyo, asi kutaurirana nguva dzose hakusi kwakajairika.Chinhu chisingarambiki, kana kuti, chikuru chekuwedzera ndechekuti kutaura kwevhidhiyo kutenderera pasirese chinhu chitsva uye chinonakidza kune wese munhu.
Saka, nhasi inonakidza yewebhu chat yakavhurika iwe, iyo isina kufanana nemamwe masevhisi.Kana iwe wanga uchitsvaga yemahara vhidhiyo chat yako, Googleme ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo.Kuburikidza nechatroulette iwe uchaita kufona kunonakidza nguva dzese, kuseka pamwe chete, dzidza ruzivo rwakawanda runobatsira.Iwe haufanirwe kuidhawunirodha, nekuti iyo roulette inosarudza wauchataurirana naye, chaizvo, mumasekonzi mashoma, musikana akanaka anozoonekwa pachiratidziri ndokukupa kunyemwerera.Ipapo iwe uchatanga kutaurirana, sarudza musoro wehurukuro, tanga kuzivana.Sarudzo yekukurumidza uye isina kurongeka ichave yakabudirira kwazvo, uye iwe uchakanganwa kuti uri kutora chikamu mune chatroulette, chinhambwe chichadzimwa.
Googleme ichave ruponeso rwako kubva mukufinhwa nehusiku hunosuwisa
Zvino iwe haufanirwe kunetseka kuti hauna wekutaura naye, chat ichakuvhurira nzvimbo nyowani kuburikidza neInternet.Ikoko kuchagara kune interlocutor kwauri, roulette ichasarudza iye, uye iwe uchabvisa kusurukirwa kwakaoma kwauri.Chete mune yedu analogue yeChatroulette iwe uchakwanisa kuonga kukosha kwekukurukurirana uye hurukuro.
Chatroulette - Vhidhiyo Yako Chat
Vhidhiyo chat roulette vanopfuura hafu yemiriyoni vashandisi vanobva kuRussia neCIS nyika zuva rega rega.Asi kwete izvi chete zvinoita kuti ive inonyanya kufarirwa yemutauro weRussia chatroulette.
Vhidhiyo chat roulette inopa yakasarudzika mikana yekutaurirana yausingazowana pane chero imwe chat chat.Unoda kuve nechokwadi cheizvi?
Chatroulette iri nyore sekucheka mapeya
Iwe unodzvanya "tanga" - uye iyo chat roulette pachayo inosarudza interlocutor iwe.Uye inozviita ipapo ipapo, haufanirwe kunyoresa.Uye zvinonyanya kukosha - hapana muripo wepamwedzi, huya uye taura mahara!Kureruka uye nyore ndiyo motto huru uye chakavanzika chekuzivikanwa kwechatroulette.
Vanongozivana navo?NeVhidhiyo Chat - hapana dambudziko!
Kunyange kungotaura nemunhu wausingazivi mumugwagwa hakusi nyore kune vakawanda.Zvekutaura pakupfimbana.Vasikana vanotya kuita sevanopindira, vakomana vanomiswa nemukana wekuramba.Edza kufungidzira kana munhu wacho akagadzirira kutaura newe.Zvechokwadi, iwe unogona kuzvipira kune kuda kwekunyara kwako, kubvuma kukundwa, kupa mukutya kwe "kunyadziswa" pamberi pevanhu vose.Unogona kuramba uchirota nezvekuzivana wega.Ndekupi kuenda, sei kugadzirisa dambudziko iri?
MaSocial network ndeaya anenge atojaira.Chatroulette ndiyo mhinduro chaiyo.Iwe haufanirwe kunetseka: munhu waunosangana naye muvhidhiyo chat atogadzirira kutaurirana.Ingori nyaya yekuti "hello".
Sangana nekuonekana zvakanaka zviri nyore
Yakatungamirirwa kune chitarisiko chinoshamisa, uye interlocutor akazova chibharo chisingafadzi?Kangani kare pazuva rekutanga, mushure mekutaura nemunhu zvishoma, waida kutendeuka kutiza here?Asi mitemo yeruremekedzo inomanikidzwa kuenderera mberi nekukurukurirana kunofinha, kukunda kukwenya uye kutsamwa.
Muchatroulette, kugadzirisa dambudziko iri, ingobaya bhatani re "rinotevera", uye vhidhiyo yekukurukurirana ichakushandura iwe kune mutsva interlocutor.Ibva muChirungu, taura chete nevanhu vaunofarira navo!
Webcam ndeimwe yekuwedzera
Kukurukurirana nekufambidzana kwave nyore nekuuya kweInternet.Asi masayiti ekupfimbana uye mameseji ekutaura haakubvumidzi kuti usvike pakuziva munhu pamwe chete nekutarisana nevhidhiyo chat.Sei uchidzima zvigunwe zvako pane keyboard, kana iwe uchigona kunzwa uye kuona interlocutor?Uye hazvisi nyore kunzwisisa munhu chete nemabhii uye emoticons kubva kune isina kumeso zita remadunhurirwa.Havazotsivi kukurukurirana mhenyu.
Zvekare, unogona kuisa pikicha yemumwe munhu pane avatar - vazhinji vanonyepedzera vanoita izvi.Mune chatroulette, haugone kubiridzira saizvozvo - iwe unoona uye unonzwa mutauriri munguva chaiyo.Ne webcam zviri nyore kuita shamwari itsva!
Kure nekufinhwa uye kusurukirwa!
Munhu wose ane nguva apo kutaurirana kunoshaikwa.Chimwe chinhu chaunogona kugovera zviri nyore nemumwe munhu anofamba, iwe hausi kuda kutaura neshamwari uye hama.Chatroulette ndiyo isingaperi sosi yeakadaro "asina kujairika vafambi" - vanhu vausingazive nezvavo uye vasingakuzive iwe.Uye zvinoreva kuti hapana chekutya.Kukurukurirana kwevhidhiyo hakuzivikanwe, hapana anozokwanisa kuziva zvakawanda pamusoro pako kupfuura iwe pachako waunoda kugovera.
Muchatroulette iwe unowana zvese: kubva mukufara, kusinga vhiringike kutaurirana pamisoro isina musoro kusvika kuhurukuro dzechokwadi "moyo kuenda kumoyo".
Seka uye kurukura nyaya dzaunofarira?Zviri nyore!Kusangana nerudo rwehupenyu hwako?Edza uone kana zvichikuitira;)
Chatroulette yemafoni emagetsi
Iwe unoda kutaurirana neshamwari dzekare kana kuwana itsva kwete kumba chete kana kubasa, asiwo panzendo, uye mune chero nzvimbo yakakunakira iwe?Vhidhiyo chat rouletteyava newe munharembozha.Kuzorora kwemasikati, rwendo rurefu mukutakura hachisi chikonzero chekufinhwa.Panguva ino, unogona kujairana uye kutaurirana nevamwe vashandisi vechatrouletteonline.
Iyo vhezheni yechirongwa chemafoni emafoni anochinjirwa kumasikirini eakasiyana nharembozha.Iwe unozogona kushandisa ese mabasa pasina zvirambidzo.Chinhu chikuru ndechokuwana mukana weInternet.
Vhidhiyo chat features
Nevatauriri vatsva.Kuti uwane shamwari, vanhu vane pfungwa dzakafanana kana kunyange mweya wawakaroorana naye, iwe unongoda kubatidza kamera, tinya bhatani rinoenderana pachiratidziro uye tanga kusarudza shamwari.Iwe unogona kuita zvinonakidza kuzivana nevagari vanobva kune chero nyika pasirese.
Kurukura neshamwari.Wakambosangana nechero vashandisi vevideoroulette?Inzwa wakasununguka kudzvanya bhatani pachiratidziro chefoni "Taura neshamwari", tumira chinongedzo chinoratidzika kune shamwari uye tanga kutaurirana pasina miganhu uye kunyoresa.
Nevhidhiyo kutepfenyura.Vhidhiyo yekukurukurirana nevasikanakana vakomana inogona kuitwa nevhidhiyo, i.e.vashandisi vachakwanisa kuona uye kunzwa mumwe nemumwe sekunge vari kusangana ivo pachavo.Izvi zvinoita kuti kutaurirana kuwedzere kunakidza uye kuve neruzivo.
NeSMS.Hauna chokwadi chekuti ungatanga imwe "pedyo" munoziva, tanga kutaura muchat roulette nemusikanakana mukomana kuburikidza neSMS.Mameseji, senge mafoni, anodzivirirwa ne encryption.Vanhu vasina mvumo havazokwanisa kupinda mutsamba dzako.
Kuti utange vazivikanwi vanonakidza, zvakakwana kuva nefoni mbozha neInternet kusvika.Unogona kutaura kana kufonera vatori vechikamuchevhidhiyokubva kupi zvako pasirese.
Basa redu nderei?
Vagari venyika dzese dzepasi, zvisinei nezera, hunyanzvi uye zvavanofarira, vanogona kutauriranamuvhidhiyo chat roulette.Kuti utange shamwari dzisingakanganwiki, ingobaya bhatani re "Tanga".
iwe unonyara kuzivana mumugwagwa- vashandisi vedu vakatogadzirirwa kuti vataurirane uye vave nenguva yakanaka, saka hapazovi nematambudziko nekufambidzana;
kana iwe uchida kusangana nevanhu chaivo- unogona kukoka interlocutor kubvaroulette vhidhiyo chatkusvika zuva, bato kana musangano neshamwari;
kana iwe uchida kukwenenzvera ruzivo rwako rwemumwe mutauro, unogona kudzidzira hunyanzvi hwako hwekutaurirana mune chero mutauro wepasi zvachose pasina muripo.
Chatrouletteyakavhurika kunevasikananevakomana vanosarudza yemazuva ano, nyore uye inonakidza nzira yekutaurirana.
Zvakanakira zve mobile chatroulette
Haufanire kudhawunirodha chirongwa.Zvese zvaunofanirwa kuita kushanyira webhusaiti yedu.Kuti zvive nyore kushandisa uye nekukasira kuwana, isu tinokurudzira kuwedzera Chatroulette kumabhukimaki ebrowser yako.
Mikana isingaperi yekutaurirana.Vhidhiyo chat rouletteinogona kuridzwa nevasikana kana vakomana, zera nenzvimbo yekugara hazvina basa.
Zviri nyore uye nyore kushandisa.Hapana chikonzero chekugadzira akaomesesa, pfuura nekurebesa kunyoreswa, kuita mubhadharo neSMS, ingovhura saiti uye kuzivana.
100% kuvanzika.Vashandisi havafanirwe kuisa ruzivo rwemunhu, kuisa email kero, kana kuisa nhamba yefoni.
Kukurukurirana kwakanaka.Kana nekuda kwechimwe chikonzero iwe usingade iyo interlocutor, munechat roulettepane mukana we "kupfuura" nayo nekudzvanya bhatani re "Next".
Iwe unogona kushanyira saiti chero nguva yezuva kana husiku, zvisinei nezuva rekarenda.Iwe unovimbiswa kuwana zviuru zvevasikana nevakomana online vakagadzirira kutanga kutaura izvozvi.Join theroulette vhidhiyo chat, tanga kutsvaga anopindirana uye iwe unovimbiswa kuve neinovaraidza uye isina kujairika yemahara nguva.
Nezve kambani: Vese vashandisi vevhidhiyo chat vanokurudzirwa kuverenga iyo FAQ / FAQ nemamwe mapeji, zvinongedzo izvo zvinogona kuwanikwa muboka.Usape mameseji ekusimudzira, mafoni ekuwedzera shamwari, kwaziso uye mamwe mameseji asiri enhau dzesevhisi senhau dzeboka - hazvizoburitswa.Webhusaiti: https://videochatru.com
Chatroulette https://chatruletka.com/ iri kukurumidza kuungana yakatenderedza kwete chete nyeredzi dzeTV, asiwo YouTube nyeredzi.
Usarasikirwa nevhidhiyo nyowani yeStreamers Karina, maanosangana nevashanyi vevhidhiyo chat yedu!
Chatruletka ivideochat yekusangana nekutaurirana nevanhu pasi rese.Kuenzanisa neChatroulette, ine mazana..
Muchiratidziro chakakurumbira "Evening Urgant" chave chikamu chechigarire umo Ivan Urgant anotaurirana nemunhu ane mukurumbira nevashanyi kuChatroulette yedu - https://chatruletka.com/
Nguva pfupi yadarika, Urgant akataura muhurukuro yedu yevhidhiyo naTimati
Chishamiso chinonakidza chevashandisi veIOS vasina kukwanisa kushandisa vhidhiyo yedu chat kwenguva yakareba!
Mukutenda kushivirira kwavo, takasarudza kuvaitira zvakawanda kupfuura kungoita Chatroulette - Chat Rules app ye iPhone ne iPad.
Iyo Chat Mitemo app yatovepo muApple Store, tibatane nesu!
Zvichida mumwe munhu haazive, asi isu tine vhezheni yepasi rese yeChatroulette ine kugona kusarudza nyika yeanopindirana: https://chatruletka.com/
Munguva pfupi yapfuura, Ivan Urgant naMaxim Galkin vakanyura mukutaura kwedu.Ratidza zvizere.Kune avo vasati vaona chikamu ichi, tinokurudzira kuti utarise vhidhiyo mumeseji uye ugovane neshamwari dzako.
Mu "Evening Urgant" musoro mutsva "Kusangana nemunhu anonakidza" wakaonekwa.Muchikamu chino, Ivan Urgant nemuenzi wechirongwa anotaurirana nevashanyi vevhidhiyo chat yedu
Taura nesu muvhidhiyo chat roulette!
Iye zvino vanhu vazhinji vanotaurirana mu chatroulette.Uye zvese nekuti kutaurirana kuburikidza neSMS kana pasocial network hakuchaunzi mufaro nekuda kwekuti vanhu havasi kuonana kana mumwe wevanopindirana anogona kupa ruzivo rwusina kururama.
Uku ndiko kutaurirana kwehupenyu kuburikidza newebhu kamera, apo mumwe nemumwe wevanopindira anoona chiso, manzwiro emumwe munhu.Izvo zvakare hazvirambidzwe kutaurirana uchishandisa odhiyo kana mameseji chat.Mumwe nemumwe wevaenzi vekutaura anoenda kune asina kurongeka interlocutor, uyo roulette anomusarudzira vhiri.Kana iwe usingafarire hurukuro nemunhu kana iwe usina misoro yakafanana yekukurukurirana, saka chero nguva iwe unogona kusiya hurukuro, tsvaga mumwe muteereri.Nheyo yekutanga yekutaura ndeye mutereri asina kujairika kana anopindira wausingazosangana naye panguva yekukurukurirana kunotevera.Kunze kwekuti iwe unogona kumuwedzera seshamwari.
Chati dzedu hadzizivikanwe.Izvi zvinoreva kuti hapana achaziva nezvetsamba yako kana hurukuro yako.Kunyoresa mu chatroulette hakudiwizvakare.Yese chats yeroulette yedu ndeyemahara, uye vashanyi havafanirwe kurodha chero chinhu.
Nzvimbo yedu ine nhamba huru yemakamuri ekukurukurirana kwaunogona kutaurirana pasina zvirambidzo nevasingazivi.Iwe unogona kutaurirana pasina zvirambidzo nevagari veEurope, Belarus, Russia, USA, Germany nedzimwe nyika.Sarudza chat uye taurirana pasina zvirambidzo pano uye ikozvino.Uye kuita kuti igare ichinakidza kune vashanyi, isu tinogara tichizadza huwandu hwekutaura, suma maturusi akasiyana siyana kuti zvive nyore kutaurirana kwako.
Kufambidzana uye kutaura mu chatroulette online kunonakidza!
Chatrouletteinonyanya saiti yekutaurirana, shamwari itsva, kusangana neshamwari.Nzvimbo iyi ine makamuri ekukurukurirana akasiyana-siyana ekukurukurirana kwevhidhiyo pasi rose.Asi kune zvakare mameseji uye maodhiyo chats.Uye kana iwe usingadi chimwe chinhu chinonakidza, saka tine bot - interlocutor.
Kuti utaure muvhidhiyo fomati, unofanirwa kutenga maikorofoni, webcam, mahedhifoni, laptop kana komputa.Kana zvisati zvave kukwanisa kushandisa webcam, saka kutaurirana kunogoneka mumutauro wemavara, nemamwe mazwi, kungotaura chete.
Ehe, hapana chinogona kutsiva vhidhiyo chat.Pano zvinoratidzika kuti kutaurirana kunoitika pahwaro chaihwo.Uye chat ine mukana wakadaro zvekuti vanhu vakati wandei vanogona kutaurirana panguva imwe chete.Semuenzaniso, Multichat ine hunyanzvi hwakadaro.
Chii chakajairika pakati peVhidhiyo chat live uye Vhidhiyo chat roulette?
Vhidhiyo chat live ndiyoyakasarudzika mukana wekutaura nemunhu kana vanhu vanogara kwete kure kure, asiwo makiromita akawanda kure.Pakutanga kwekukurukurirana, hapana anoziva kuti rudzii rwemunhu waachasangana naye pakukurukurirana.Asi iwe unogona kugadzirisa mamwe ekutsvaga paramita: murume kana mukadzi, zera, nyika.Panguva imwecheteyo, kutaurirana kunoitika mune yakasununguka format.
Kuti utange kuonana nemumwe munhu, iwe unofanirwa kuisa iyo chat yekufarira, vhura iyo webcam, uye iyo roulette inotora isina kurongeka interlocutor.
Vhidhiyo chatroulette haingori hurukuro yepamoyo.Kazhinji vanhu vanowana mweya wavo wekuroora pano.Nekutsvaga kwakadaro, unogona kushandisa Indaneti.Yedu roulette ichatsiva chero saiti yekufambidzana, uye hapana chauchazofanira kubhadhara.Mukuwedzera, panguva yekukurukurirana, kana munhu ari kune zvaunoda, iwe unogona kuchinjana mazita naye: social network, Skype, nhamba yefoni, dzimwe nzira dzekukurukurirana.Uye shure kwaizvozvo, zvose ushamwari uye zuva, muchato zvinogoneka.
Mukutsvaga kutaurirana, hauzozvidembi kuti wauya kune yedu chat.Mushure mezvose, isu takagadzira akanakisa akagadziridzwa maturusi ekutaurirana.
Vasingazivikanwe chat roulette, Russia 17+
Iyo yakanakisa isingazivikanwe yepamhepo chatting app yakaunganidza 25,000,000+ vanhu kuti vawane shamwari nyowani uye kufambidzana.
Taura nevasingazivi nezve chero chinhu.Ita shamwari itsva, bvunza mibvunzo.Govera zvakavanzika kana kungouraya nguva.Hapana achakutonga nekuti hapana achakwanisa kuziva kuti ndiwe ani!
App anti-maficha:⁃ hapana mazita⁃ hapana nhoroondo⁃ hapana ads⁃ hapana mubhadharo⁃ hapana spam⁃ hapana marobhoti⁃ hapana njodzi
AntiLand ibasa rakachengeteka, risingazivikanwe remeseji.Yako yemunhu data haina kuchengetwa kana kugovaniswa, saka hapana anogona kuziva zita rako kana nhamba yefoni.Pane zvinhu zviviri chete zvinokuita kuti usiyane: yako inoyevedza avatar uye kutaura kwako.
Mameseji ese ari mumakamuri ekutaura akavharirwa zvakachengeteka uye anodzima ega.Mameseji makumi mashanu ekupedzisira chete ndiwo asara mune yega chat.Chenjera kuti usapotsa nyaya inotonhorera kana foto ine kukanganisa.
HAPANA kushambadzira, HAPANA MARI
AntiLand hairatidze kushambadza.Uyezve, iyi chat ndeye 100% yemahara: hapana mipiro kana mu-app kutenga.
Isu tinonyatso shanda kuti tive nechokwadi chekuti kutaurirana kwako mune chat kuri nyore.Naizvozvo, takauya neyakakosha anti-spam uye anti-mafashama system.Inoziva spammers uye inovabvisa kubva pasocial network.
Yese chats yedu inopindwa chete nevanhu vapenyu online.Sangana nevakomana vakanaka, vasikana vasina murume uye vechidiki vane hushamwari.Taura nevanhu, kwete bots.
AntiLand yakagadzirirwa vese vechidiki uye vakuru.Yedu otomatiki analytics mafirita pre-moderate zvese zvinyorwa uye mapikicha kuchengetedza nhaurirano munharaunda.Uye zvakare, wese anoshanda mushandisi anogona kujoinha timu yedu inokurumidza kukura yeadmins kugadzira mitemo mitsva uye kutonga kurongeka.
Mushandisi wega wega anogona kunyorera kune Super Power inovapa sarudzo dzakadai se:- kuwana anopfuura zana ekuwedzera anoyevedza mavatars- epamusoro zvinzvimbo zveako akavanzika chats mune rondedzero yevamwe vashandisi- zvakapetwa karma karma kune yega meseji inotumirwa- kugona kusarudza. ruvara rwemameseji ako- kujekesa chimiro muchats- online mamiriro ekugadzirisa- premium rutsigiroOtomatiki-inogoneka kunyoreswa.Pane zvirongwa zviviri zviripo: 1 mwedzi, 12 mwedzi.Unogona kubuda chero nguva.Kubhadhara kuchabhadhariswa kune yako iTunes account pakusimbisa kutenga.Kunyoresa kwako kunozozvivandudza otomatiki kunze kwekunge wazvikanzura angangoita maawa makumi maviri nemana isati yapera nguva iripo.Huwandu hwekubhadhara kunotevera huchabviswa mukati maawa makumi maviri nemana isati yapera nguva iripo.Iwe unogona kubata zvaunonyoresa mufoni yako iTunes & App Store marongero.
Chii chinonzi chatroulette zvakadzama
Nhasi, vakawanda vari kusangana nokushaikwa kwekurukurirano.Izvi zvinokonzerwa nekuti vazhinji havana nguva yekufambidzana.Vanhu vari kushingaira kuvaka basa, kugadzirisa matambudziko akasiyana-siyana, kana kuti havazivi kuti vangatanga sei nhaurirano inofadza nemunhu wausingazivi uye vataure ivo pachavo pane zvakanaka.Zvisinei, dambudziko rekukurukurirana rinogona kugadziriswa nokukurumidza.Chatroulette ndiye mubatsiri wekutanga mune izvi.Iyi imhando yeimwe nzira yekutaurirana pasocial network neshamwari nevadikani.
Chatroulette haisi chete nezvemukana wekuwedzera denderedzwa revanozivana dzimwe nguva.Muchiitiko ichi, munhu anodzidza kuzvibata zvakanaka mumamiriro ezvinhu asina kukwana uye kutaurirana nevanhu vakasiyana muzera, maonero enyika, mari yekuwana, zvido, nezvimwe.Chiitiko chacho chinogona kuva chinofadza zvikuru uye chinofadza.Izvi ndezvekubuda munzvimbo yako yekunyaradza uye mukana wekuburitsa zvizere kugona kwako mukutaurirana.Pano hazvichagoneke kushandisa mitsara yakajairwa uye kuomerera kune yakamiswa algorithms.
Chatroulette kutaurirana mhenyu uchishandisa webcam.Muchiitiko ichi, vanopindira vanoonana uye vanotaurirana zvakananga.Nekudaro, zvakare zvinogoneka kutaurirana kuburikidza nemameseji chat kana odhiyo.Munhu wese ane kodzero yekusarudza.Vanhu vanogara vachiwira kune vasina kurongeka interlocutors.Ivo havamboziva wavanozofanira kuvaka nhaurirano inotevera.Zvinoshamisa kuti anogona kuva muvakidzani kana munhu anobva kune imwe nyika.Unogona kusiya nhaurirano chero nguva kana chimwe chinhu chisingafarire kana kukanganisa.Mune ramangwana, hazvizove zvakaoma kuwana mumwe wekutaura naye.
Iyo sisitimu inovimbisa kuti vatori vechikamu vanongoitika havazvidzokorore.Mukana wekusangana zvakare mudiki zvakanyanya.Ndicho chikonzero iwe unogona kuzvibata pachena uye zvakasununguka.Zvisinei, kana iwe uchida, zvinokwanisika kuwedzera interlocutor seshamwari kana akaita seanofadza uye pane chido chekuenderera mberi kuzivana.
Chatroulette haizivikanwe.Vashandisi vanogona kutarisira yakakwirira kuvanzika chikumbaridzo.Unogona kutaurirana pasina muripo uye mune "isina-kumira" modhi.Hapana chaunoda kudhaunirodha.Kurumidza kukudziridza hunyanzvi hwako hwekutaurirana uye uwane vanofarira chaizvo vanopindirana online.
Chat Roulette ihurukuro yevhidhiyo iyo inokutendera iwe kuti utaure usingazivikanwe nevamwe vashandisi kuburikidza neAroid.Kusiyana neakawanda maapplication akafanana, chirongwa hachidi kuti iwe usunge chero email kero kana nhamba dzenhare.Inokwezva kutarisa kwevashandisi uye kusavapo kwechido chekuuya nepassword uye login, kunyangwe kunyoresa.Chaunongoda kuti utange kugadzikana kweinternet.
Kuti utange nevhidhiyo chat iwe uchada:
Vhura iyo application, uchibvumira kuwana maikorofoni uye selfie kamera pa Android, nerubatsiro rwekutaurirana kunoitwa.
Vhura chat uye taura kana taura neanozvisarudzira interlocutor.
Sarudzo inoitwa zvisina tsarukano, inopembedza zvizere zita rekushandisa.Vanhu vaviri vanobatana, uye chimiro chechirongwa cheChatRoulette chakakamurwa nepakati.Mufananidzo unobva kumberi kwekamera ye interlocutor unoonekwa muchikamu chepamusoro chechidzitiro, muhafu yezasi pane hwindo diki rine mufananidzo unoratidzwa nemushandisi selfie kamera.Kana vatori vechikamu muhurukuro vaisada mumwe nemumwe kana kuti mumwe wavo haasi mumamiriro ekutaurirana, hurukuro yevhidhiyo inogadziriswa nyore nyore, mushure mokunge kutsvaga kwemutauriri mutsva kunotanga.
Pakati pemabhenefiti makuru eChatRoulette kuve nyore kushandisa - haufanirwe kudzidza mirairo kuti ushande nechirongwa.Iko kushandiswa kwemahara, pasina zvirambidzo pakushanda.Mamwe mapoinzi akanaka:
Mazhinji sarudzo dzekugadzirisa, kusanganisira kuchinja (kuderedza kana kuwedzera) saizi yehwindo uye kupepeta mufananidzo.
Basa rekutumira mameseji kune interlocutor.
Kusazivikanwa zvachose.Chatroulette yeAroid haibvumire iwe kuti uwane ruzivo nezve mushandisi, kusanganisira zita, nhamba yefoni, uye kunyange nzvimbo yekugara.Vanopindirana vanotaurirana ruzivo kune mumwe nemumwe kana chido chakadaro chikamuka.
Mukana wekutaurirana nevanhu vanobva kune chero nyika pasirese.
Pasinei nekusazivikanwa, chirongwa ichi chinopa kumwe kuchengetedza kune vatori vechikamu.Kutevedzera mitemo kunotariswa nguva dzese nevatungamiriri, vanogona kunyunyuta nekutyorwa kwemitemo: kutuka, kupihwa zvisina kunaka, hutsinye kana kutyisidzira.Vashandisi vanoteerera mitemo vane matauriro asina magumo.
Unogona kudhawunirodha Chat Roulette ye Android mahara kubva kune yakananga link pazasi.